**(ဂျူလိုင် ၁၉ ၂၀၁၀)ဖြည်စွက်
တင်တဲ့ပို့စ်များအတွက် ငွေပေးစံနစ်ကို အဆင့် ၃ဆင့် သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။
Number of points for each comment: 10 ( ကော်မန့်တခုအတွက် ၁၀ ပွိုင့်)
Number of points for each post: 100 (ပို့စ်တခုအတွက် ၁၀၀ ပွိုင့်)
Number of points new members get for registering: 400 ( မန်င်ဘာအသစ်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ၄၀၀ ပွိုင့်)
Number of points for “daily” login: 4၀ ( နေ့စဉ် ၀င်ရောက်ဖတ်ရှု့ ခြင်းအတွက် တရက် ၄၀ ပွိုင့်)
ပုံစံ အသစ်လေး ဖြစ်သွားတော့ သဘောကျတယ် အဟောင်းလည်း ပြန်ဖြစ်သွားကော အရင် avator ရုပ်ဆိုးဆိုးကြီး ပြန်ဖြစ်သွားကော အဲဒါတော့ စိတ်မကောင်းဘူး။ အသစ် အားသာ ချက်ကို ပြောရရင် ဘယ် စာမျက်နှာ ရောက်ရောက် အခု နောက်ဆုံး ကွန်မန့်ပေးသွားတဲ့ လင့်လေးတွေကို တခါတည်း ကူးလို့ရပါတယ် အဲဒါလေးကို သဘောကျတယ်။ အ၀င်အထွက် ခက်တာ မခက်တာတော့ သတိမထားမိဘူး အဟောင်းမှာကော အသစ်မှာပါ.. သေချာတာကတော့ ခဏခဏ ရပ်ရပ်သွားတယ် ခဏနေသတိရရင် ပြန်ဝင်လိုက်ရင်တော့ ဟုတ်နေပြန်ကော။
ကျွန်တော် အခုအကြံပေးချင်တာကတော့ Home Page ကို လှလှပပလေး ဖြစ်စေချင်တာပါပဲခင်ဗျား။ ကြည့် ရတာ ဘယ်လို မှ ဘောင်မ၀င်ဘူး။ထွက်ချင်တဲ့ 
ပုံတွေနဲ့ Post တင်ချင်တာမရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ပုံကတစ်ပုံပဲရတယ်။ ပုံအများကြီးဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ပြောပြပါ။
အက်ဒမင်ရေ တိုင်ချင် တောချင်ရင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ တိုင်စရာတွေ များနေတယ် နော် အကြံပေးပါအုန်း.. တိုင်မှာတော့ မဟုတ်ဘူး မှားလို့ အကြံပြုချင်လို့.. ဟီးဟီး
ကိုအက်မင် … post ရေးတဲ့နေရာမှာ ရေးလိုက်တာ စာလုံးအဖြူတွေပဲဖြစ်နေလားမသိဘူး … ရေးလိုက်ရင်မမြင်ရဘူး select all လုပ်မှ မြင်ရတယ်ဗျ… အဲ့ဒါပြောပြဦး … post က တစ်ခါမှ မတင်ဖူးသေးဘူး အခုမှစတင်မှာ .. ပီးတော့ polls မှာ ဘယ်ဂျာနယ်ကို အကြိုက်ဆုံးလဲ vote လုပ်လို့မရဘူး
စာလုံးရေ 1000 မပြည့်ရင် ဘယ်လောက်မှမရတော့ဘူးလားဟင် . . .
ဒီနေ့ အဖို့ အဟောင်းဖြစ်လိုက် အသစ်ဖြစ်လိုက်..
မြန်မာပြည် ပိုက်ဆံကဘယ်မှာထုတ်ရမှာလဲ အဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါဦး
ကိုအက်မင်ရေ သီတာ ဒီ website ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာ တော်တော်ကြာပြီ။ အင်တာနက်စသုံးကတည်းက ဒီ website ကို စဖတ်ဖြစ်တာပါ ။ အစကတော့ စာရေးဖို့ ဆန္ဒမရှိဘူး ။အခုတော့မရတော့ဘူး …ပိုးထလာပြီး။ ရေးတော့မယ်
ဆာဗာပြောင်းတာမှာ… အသစ်ကလည်း ဒီဝက်ဆိုက်က Resources အရမ်းသုံးတယ်ဆိုပြီးဖြစ်နေလို့ ဖုံးချည်းခေါ်နေရတာဗျာ။
ယနေ့ ပို့စ်တိုင်းကို ၀င်လို့ရတယ် သို့သော်.. ပို့စ်တိုင်းတွင် log in လုပ်ပြီးသား မဖြစ်ဘဲ ပြန်ပြန်ထွက်သွားတယ် ကွန်မန် ပေးလို့ရဘူး နောက်ပြန်ပြီး log in ၀င်ရင်လည်း ဘယ်လောက် ၀င်ဝင် ကွန်မန့်ပေးလို့မရဘဲ ဖြစ်နေတယ် နဲနဲ စစ်ဆေးပေးပါအုန်း။ ဒီနေ့ အသစ်တင်တဲ့ ပို့စ်တွေက ကွန်မန့်ပေလို့မရတာ။ အဟောင်းတွေက ရပါတယ်။
ဒီနေ့တင်တဲ့ အသစ်တွေက အဟောင်းပို့စ်တွေလောက် မကောင်းလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အယ်ဒီတာမင်းက စာမျက်နှာချွေတာတဲ့သဘောနေမှပါ။ ဟီဟိ ကျွန်နော် ပို့စ်အသစ် ဒီနေ့တပုဒ်မှ မတင်ဘူး။
ရန်ထောင်ပြီး စွာဖို့အတွက်တော့ ၀င်ပြီး ကွန်မန့်ပေးလို့ရတယ်.. လောက ကြီးက တရားပြတာနဲ့ တူတယ် အကုသိုလ် မများနဲ့ ဆိုပြီးတော့
အခုလိုမျိုး စာရေးသူများအတွက် အကျိုးအမြတ်ရအောင် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Report ဆိုတာလေး ပေါ်လာတယ် အဲဒါ ဘယ်လို အသုံးပြုရမလဲ နဲနဲ လေး ရှင်းလင်းပေးပါအုန်း
ဒီနေ့လည်း log in ၀င်လိုက် log in ပြန်ဖြစ်လိုက်နဲ့ ချာလပတ်လည်နေပါတယ် တင်တဲ့ ကွန်မန့်တွေလည်း မတက်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
မန်းလေးဂေဇက်မှာ ဘယ်တုံးကစတည်ထောင်တယ်၊ ဘယ်သူတွေနဲ့၊ ဘာညာသာတကာဆိုတာကို လည်းတင်ထားတာ မတွေ့ရဘူး။ မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်က မန်းလေးဂဇက်ကို စတည်ထောင်ခဲ့တယ်လို့ပဲ ယူဆရမလိုဖြစ်နေပြီ။ လူတွေသိအောင် မန်းလေးဂေဇက် ပုံနှိပ်နဲ့ အွန်လိုင်းဗားရှင်းတို့ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းလေးတွေကို ပို့စ်အသေတခုဖြစ်ဖြစ်၊ ဟုမ်းပေ့ခ်ျအပေါ်က တပ့်ဘ်မှာဖြစ်ဖြစ်တင်ပါအုံး။
လေးပေါက် ပြောသလိုဘဲ.. တနေကုန် အင်တာနက် မရပေမဲ့.. တနေကုန် အင်တာနက် စာမျက်နှာ ဂေဇတ်ကို ဖွင့်ပြီး F5 နိပ်ပြီး တနေတာ ကုန်လွန်နေတာ.. ရပြန်တော့လည်း သူများ မန်းသွားတာကို လိုက်ဖတ်ရတာ အမော.. ပွိုင့်မပေးလည်း ရေးရတာ ပျော်တယ်.. ပွိုင့်ကတော့.. စဉ်းစား ထားတာ တခု ရှိတယ်.. အချိန် တန်မှ ထုတ်ပြောမယ်
ကျွန်တော်တစ်ခုမေးစရာရှိတယ် မရှင်းတာလေပါ နိုင်ငံရေးစာတွေပါတွေတင်းလို့ရလာမသိဘူ နော် အဲဒါတင်ရင်ပွိုင့်ပေးမလာ ဒါမှမဟုတ်ကိုတင်လိုက်တဲ့စားကို ပယ်ဖျက်မလာ ကျွန်တော်မသိလို့ရှင်းပေးစေချင်ပါတယ်
အယ်ဒီတာကိုယ်စား ဦးကြောင်ကြီးကနေ အဖြေပေးလိုက်ပါမယ်ကွယ်။ နိုင်ငံရေး၊ ရွေးဂေါက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ စာတွေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝေဖန်တဲ့စာမျိုးတွေကို ကြက်ဖွတ်များအနိုင်မရခင် နိုဝင်ဘာ၇ရက်နေ့အထိ ပင်မစာမျက်နှာမှာ တင်ပေးထားမယ်လို့ ကြေငြာချက်ထုတ်ထားတာ ရှာကြည့်လိုက်ပါ။ အဲဒီနေ့ကျော်ရင်တော့ နိုင်ငံရေးသမားများလည်း ကိုဖြိုးတို့နဲ့ ဂိုဏ်းတူမောင်နှမများ ဖြစ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ လက်လျော့လိုက်ပါတော့ ငါ့တူမကြီးရယ်။ လောကကြီးက မတရားဘူးကွဲ့။ ကြုံလို့ပြောလိုက်မယ်၊ ဆူးဆိုတာက လက်သံပြောင်တဲ့ စွမ်းအားရှင်၊ ဝေဝေဆိုတဲ့ဆရာမက အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင်မျာအဖွဲ့ဝင်၊ မိုက်ကယ်ပုဆိုတဲ့လူက ဘာမှမလုပ်ဘဲ ဝေစုခွဲစားတဲ့ရဲမူး၊ ဦးကြောင်ကြီးက ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင်၊ ကိုခိုင်ဆိုတာကတော့ ငှက္ကဌပေါ့ကွယ်။ သူပြောင်းမှရတာ၊ ငှက္ကဌဆိုတာကလည်း ဦးကြောင်ကြီးတို့ ပြောမှသိရတာဆိုတော့ နဲနဲသီးခံပြီး တသက်လောက်စောင့်လိုက်ပါကွယ်။ ငါ့တူမကြီးကြည့်ရတာ ဦးကြောင်ကြီးတို့ ပါတီကို မဲပေးမဲ့ပုံလည်း မရှိတော့ အချိန်ကုန်ခံလေပန်းလို့ မဖြစ်ဘူး။ မဲဆွယ်ဖို့ သွားလိုက်အုံးမယ်.. လာကြပါဗျို့ ဟောဒီကကြက်ဖွတ်….
ကျွန်တော်တစ်ခုမေးချင်တယ် မရှင်းတာလေတွေပေါ့ ကျွန်တော်အခုစားတင်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေတင်လို့ရမလာ တင်လို့ရရင်လဲဘယ်လိုပွိုင့်ပေးမလဲ နောက် ကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ တင်လိုက်လို့ရှိရင် ပယ်ဖျက်မလားအဲဒါလေကိုသိချင်ပါတယ်
အပေါ်မှာပြောထားတယ်လေ..။ အဲဒီအတိုင်းပါပဲ..။ ပွိုင့်လည်းပေးပါတယ်..။ ၇ ရက်နေ့အထိပေါ့..။
“မတူသော အတွေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်စာ ချရေးပါ” ဆိုတော့ ဘာသာပြန်တွေကျတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကျွန်တော်ကတော့အဲဒါလေးလည်းလိုတယ်ထင်လို.ပါ
အသိနောက်ကျလေးခြင်း အကိုပေါက်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့်လာခဲ့ရတာ ခုထိနားမလည်သေးဘူး
အားလုံးကို မင်္ဂလာပါလို့ နုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ